Oromo Scholar proposes the foundation of a national council of Oromia – Welcome to bilisummaa
bilisummaa January 27, 2016	1 Comment
Previous Huffisii Diinaa Oromo hin Baaragsu
Next Oromo TV: Marii Bakka-bu’oota Jaarmayoota Siyaasaa (Oromoo)
Yaadnikee gaariidha. Maaliif garuu ABO isuma jiru keessa galtanii hin dalagne. Yeroo baayyee, qabsoo Oromoo keessatti, oduutu baayyata. Kun immoo, sammuu ummata keenyaa gargar bittinneessa. Yeroo gabrummaa dheeressa. Kanaafuu, isuma jiru keessa seennee yoo waljajjabeessine gaarii natti fakkaata.
Kun yaada mataa kootiiti.